Soo dejisan Outlook 1.3.17 – Vessoft
Soo dejisan Outlook
Muuqaalka – qalab ku haboon maamulka email ah. Software ayaa si toos ah go’aansan mailkooda ah, muujinayo farriimaha ugu muhiimsan iyo gelinaya kuwa aan muhiimka kale qaybaha. Muuqaalka u saamaxaaya in ay isticmaalaan xisaab-duwan oo isku mar iyo lifaaq files si ay emails ka OneDrive, WordPress iyo adeegyada kale. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay si deg deg ah u tirtirto, archive, ama idinku soo diro farriin jadwalka. Muuqaalka ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay taariikh dhisay-in oo kuu ogolaanaya in aad reserved wargelinta ah ee dhacdooyinka muhiimka ah.
Ku haboon email
Warqad Automatic kala sooca
Awoodda in ay ku soo lifaaq files si emails
Outlook Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... AccuWeather 4.1
العربية, English, Українська, Français... Google Earth 8.0.2.2334
العربية, English, Українська, Français... Wattpad 6.7.2
العربية, English, Українська, Français... YouTube 10.34.57
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... Microsoft Office Mobile 15.0.4522.2000
العربية, English, Français, Español... Megapolis 2.21